नोट र इलेक्ट्रिक गेट भल्भ स्विच को सुरक्षित प्रयोग - नयाँ - Minrui
घर > > नोट र इलेक्ट्रिक गेट भल्भ स्विच को सुरक्षित प्रयोग
नोट र इलेक्ट्रिक गेट भल्भ स्विच को सुरक्षित प्रयोग
इलेक्ट्रिक गेट भल्भ स्विचमा नोटहरू र सुरक्षित प्रयोगका लाभहरू, भरपर्दो सीलिंग, राम्रो इलास्टिक मेमोरी र लामो सेवा जीवन। यो इलेक्ट्रिक गेट भल्भ, पानी, ढल निकास, निर्माण, पेट्रोलियम, लोचदार वाल्व सीट सील गेट भल्भ, रसायनिक उद्योग, खाद्य, औषधि, हल्का सुख्खा गेट वाल्भ कताई, इलेक्ट्रिक पावर, पोत, धातुकर्म, ऊर्जा प्रणाली र अन्य संस्थाहरू।
इलेक्ट्रिक गेट वाल्भ क्षैतिज पाइपलाइन वा ठाडो पाइपलाइनमा स्थापना गर्न सकिन्छ। एकल र डबल गेट वाल्भहरू तेर्सो पाइपलाइनमा स्थापना हुनुपर्दछ। ह्यान्डव्हील भल्भको माथि अवस्थित हुनुपर्दछ, र तलतिर स्थापना गर्नु हुँदैन। इलेक्ट्रिक गेट भल्भको प्रवाह दिशा प्रतिबन्धित छैन।
इलेक्ट्रिक गेट वाल्भहरू प्राय: फ्ल्यांगहरू वा वेल्डिंगको लागि विशेष अनुप्रयोगहरू हुन्छन्।
इलेक्ट्रिक गेट भल्भका लागि के आवश्यकताहरू छन्? मैले केमा ध्यान दिनु पर्छ?
ठूलो व्यास, उच्च-दबाव गेट भल्भको लागि, खोल्ने र टोक़ ठूलो छ। खोल्ने र टोकलाई कम गर्न क्रममा, बाइपास भल्भ स्थापना गर्न सकिन्छ। बाइपास भल्भ उपकरण मुख्य गेट भल्भको बाहिर अवस्थित छ, र यसको इनलेट र आउटलेट मुख्य गेट भल्भको दुबै पक्षहरूसँग समानान्तर जडित छन्। मुख्य गेट भल्भ खोल्नु अघि बाइपास भल्भ खोल्नु पर्छ। भल्भमा प्रवेश गरे पछि, मुख्य गेट भल्भको अगाडि र पछाडि बीचको प्रेशर भिन्नता कम गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि मुख्य गेट भल्भको खुला टोक़लाई कम गर्न सकिन्छ। बाइपास भल्भ क्यालिबरको चयन मुख्य भल्भ क्यालिबर र अनुप्रयोग आवश्यकताहरूको आधारमा विचार गर्नु पर्छ।
इलेक्ट्रिक गेट भल्भ एक प्रकारको कट-अफ भल्भ हो, र यसको सिलिंग प्रदर्शन कट-अफ भल्भको भन्दा खराब छ। विद्युतीय गेट भल्भको मुख्य "कर्तव्य" भनेको "पानी प्रवाह कटौती" र "निरन्तर पानी प्रवाह" भनेको न्यूनतम प्रतिरोधमा हुन्छ। यो बहाव र मध्यम को दबाव समायोजन गर्न उपयुक्त छैन। उदाहरण को लागी, यदि कन्डिसन एक लामो समय को लागी गरीएको छ, सीलिंग सतह को माध्यम बाट मात्र धोईन्छ, जो छाप को प्रदर्शन को प्रभावित गर्दछ।
ध्यान तापमान, दबाव र विद्युत गेट वाल्व माध्यम को विश्वसनीयता मा भुगतान गर्नु पर्छ। उच्च तापक्रम र उच्च दबावमा, तापक्रम परिवर्तनले गेटलाई मर्न सक्दछ, र मध्यम असमान तापक्रमको कारण, अनसेलिंगको घटना सामान्य रूपमा देखा पर्दछ। चेक भल्भको प्रकार गेट भल्भको लागि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
अघिल्लो:स्टेनलेस स्टील ग्लोब वाल्व सामग्री परिचय र विशेषताहरू